Maraakiib Shidaal oo ku gubatay Xeebaha Gacanka Cummaan.
Dhageyso: Xalqada 10aad ee Barnaamijka Dhulkii Awoowayaasheen Yaa soo dhicin doona?.
Daawo Video: Wareysiyo laga kala qaaday bulshooyinka ku nool Burco iyo Saakow oo kaa Yaabin doona.
Taliyihiin Ciidamada Danab ee deegaanka Baarka oo ladilay.
dhiillo colaadeed oo ka jira deegaanno katirsan Galguduud.
Thursday June 13, 2019 - 11:14:18 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Wararka ka imaanaya mandiqadda bariga dhexe ayaa sheegaya in weeraro xooggan ay lakulmeen maraakiib ganacsi xilli ay ku safrayeen gacan biyoodka Cummaan.
Wakaaladaha wararka ayaa sheegaya in ugu yaraan laba Markab oo laga kala leeyahay wadamada Norway iyo Banama ay lakulmeen weerar sababay in uu dab qabsado haama shidaal ah oo ay sideen, qiic iyo Uuro Madoow aya cirka isku shareeray goobta weerarku ka dhacay oo ah khaliijka Cummaan.
Wakaaladda wararka ufaafisa dalka Iiraan ayaa sheegtay in ciidamada badda wadankaas ay soo bad baadiyeen 44 qof oo kamid ahaa shaqaalaha labada Markab ee weerarka lakulmay.
Warar soo baxay ayaa sheegaya in Maraakiibta laweeraray ay shidaal kasoo daabuleen dekadda magaalada Abu Dubai ee wadanka Imaaraatka carabta waxaana ka babanaya calamada Banama iyo Jaziiradaha Maarshal balse mid kamida maraakiibta milkiyadeeda waxaa leh Norway.
Taliska ciidanka Mareykanka ee ku sugan mandiqadda bariga dhexe ayaa xaqiijiyay in ay soo gaareen baaqyo kaalma weydiisasha ah balse aysan wali ka jawaabin, weerarkan wuxuu imaanaa bil kadib markii taageerayaasha iiraan ay afar Markab ku weerareen xeebaha wadanka Imaaraatka Carabta.
Xiisadaha u dhaxeeya Mareykanka iyo dowladda Iiraan ee ku aaddan isticmaalka marin biyoodka Hormuz ee istiraatiijiga ah ayaa laga yabaa in uu xiriir laleeyahay weeraradan lagu qaaday maraakiibta shidaalka ee ka dhacay gacan biyoodka Cummaan.
Xuuthiyiinta oo Maraakiib ganacsi ku qafaashay xeebaha dalka Yemen.
Dowladda Mareykanka oo la wareegtay Ceelasha Shidaalka dalka Suuriya.
Sidaan ayay duqeyntii Xuuthiyiinta u burburisay Keydadka Shidaalka dowladda Sacuudiga [Sawirro].
Dowladda Sacuudiga oo soo bandhigtay hubkii loo adeegsaday Weeraradii Kheydadka Shidaalka ARAMCO.
Video+Warbixin: Muxuu Trump udiiday in Mareykanku dagaal lagalo Iiraan si loo difaaco Shidaalka Sacuudiga?
Dowladda Iiraan oo lagu eedeeyay in ay Mas'uul ka aheyd duqeymihii Keydadka Shidaalka Sacuudiga.
Dowladda Iiraan Oo Xaqiijisay in ay gacanta ku dhigtay Markab Shidaal.
Sawirro: Muxuu Ka dhiganyahay Weerarka Maraakiibta shidaalka qaadaa lagu gubay ee Gacanka Cummaan?